Wabiilee gara wardiilee biraa fi URL wabeeffaman
Fakkkeenyaaf, yoo fuula Interneetii odeeffannoo jijjiirraa gabaa ammee man'eelee wardii keessatti qabatu argatte, fuula kana LibreOffice Calc keessatti mala armaan gadiitti fayyadamuudhaan fe'uu dandeessa.
Galmee LibreOffice Calc keessatt,qaree man'ee itti deetaa alaa saaguu barbaaddu keessatti qubachiisa.
URL kan galmee ykn fuula Saaphaphuu qaaqa keessatti galchi. URL dhangii: http://www.my-bank.com/table.html ta'uu qaba. URL qe'ee ykn faayiloota netwoorkii bal'ina qe'ee xurree qaaqa Faayilii - Bani keessatti argamu dha.
LibreOffice fuula Saaphaphuu ykn faayilii "duubee" keessatti fe'a, kana jechuun, osoo hin mul'isin jechuu dha. Sanduuqa tarree guddaa kan qaaqa Deetaa Alaa keessatti, maqaa wardiilee maraa ykn hammangaawwan maggaafaman irraa filattu arguu dandeessa.
Wardiilee tokko ykn ol ykn hammangaawwan moggoofaman filadhu. Dalagaa ufmaan of fooyyessaa daqiiqaalee "n" hundaa booda kakaastees Tole cuqaasuu dandeessa.
Qabiyyeewwan akka geessituu galmee LibreOffice Calc keessaatti saagama.
Wardii kee olkaayi. Yeroo booda bantu, LibreOffice Calc gaaffii hordofuudhaan maadheelee hidhataman fooyyessa.
Deetaa alaa gabatee keessatti saaguu (GaafataSaaphaphuu)
Title is: Wabiilee gara wardiilee biraa fi URL wabeeffaman